Qarax Baydhabo - BBC Somali
5 Maarso 2012
Ciidamo ka tirsan dowladda KMG ee Somalia ayaa qarax lagula eegtey magaalada Baydhabo.
Wararka halkaasi laga helayo ayaa sheegaya in laba ka tirsan ciidamada DKMG ay ku dhaawacmeen.
Hase yeeshee Cabdifataax Maxamed Geesey oo ka tirsan mas'uuliyiinta DKMG ee ku sugan Baydhabo ayaa BBC-da u sheegey in qaraxaasi aaney cidina wax ku noqon, ninkii ka dambeeyeyna gacanta lagu soo dhigey.
"shacabka ayaa naga caawiyey oo degdeg inoo soo wargeliyey markey arkeen ninkan oo baxsanaya kadib markii uu fuliyey qaraxan isagoo adeegsanaya qalab meel fog laga hago miinooyinka" ayuu yiri Cabdifataax Geesey.
Magaalada Baydhabo waxay laba toddobaad ka hor u gacan gashey ciidamada Ethiopia oo kaashanaya kuwa DKMG ee Somalia, iyagoo halkaasi ka qabsadey kooxda Al-Shabab.